Soo dejisan Hetman Partition Recovery 3 Standard... – Vessoft
WindowsNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaHetman Partition Recovery
Bogga rasmiga ah: Hetman Partition Recovery
Hetman Recovery Barzakh – software ah inuu ka soo kabsado xogta lumay oo la tirtiro. Software waxay hubisaa in la soo celiyo files ka dib markii formatting ama dhaawac ah drive adag, nadiifinta ee dambiil, nidaamka shil iwm Hetman Recovery Barzakh taageertaa qaabab badan oo ka mid ah falanqaynta nidaamka joogitaanka xogta tirtiray oo awood u arkaan in ay ka kooban files ka hor soo celinta. Dhamaadka hanaanka soo kabashada software awood u ah si loo badbaadiyo faylasha on drive ay adag tahay, xogta geliyaan si ay u server ka fog ama abuuro ay ISO image. Recovery Barzakh Hetman hubisaa sida ugu haboon si loo soo celiyo files adigoo isticmaalaya sayidkii hay’daha.
Ladnaansho xogta tirtiray ka cajalladaha burburay
Soo Celinta faylasha ka sidayaal xog kala duwan iyo qaybaha nidaamka
Search Advanced xogta la tirtiro
View ka mid ah waxyaabaha ku jira faylasha ka hor dib u soo celinta
Save the xogta soo kabsaday qaabab kala duwan
Soo dejisan Hetman Partition Recovery
Faallo ku saabsan Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery Xirfadaha la xiriira